Diego Costa oo lagu xukumay lix bilood oo Xabsi ah & Faah-faahinta kiiska loo haysto – Gool FM
(Madrid) 04 Juun 2020. Sida wararku ay sheegayaan Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid ee Diego Costa ayaa lagu xukumay lix bilood oo Xabsi ah, inkastoo xukunkaas xabsiga ah uu gadan karo.
Xiddiga xulka qaranka Spain ee Diego Costa ayaa lagu haystaa kiis canshuur lunsi ah oo ay kula dheggan tahay waaxda canshuurada dalka Spain.
Jariiradda El Mundo ee ka soo baxda dalka Spain ayaa warinaysa in Diego Costa uu galay dambi canshuureed, isla markaana uu lunsaday Adduun dhan 1.1 milyan oo euro.
Waxaa lagu eedeeyey inuu lacag dhan 900,000 oo gini uu ka musuq-maasuqay Dowladda Spain kaddib markii uu qariyey inuu qaatay lacag ka badan 5.15 milyan oo euro sanadkii 2014-kii, markii uu ku biirayay Kooxda Chelsea.
Waaxda canshuurada Spain ayaa si toos ah Costa ugu eedeeyey inuu galay dambi lacag lunsi ah, isla markaana ay arrintani la xiriirto xuquuqda Sawiirradiisa, waxaa la wariyey in lagu xukumay lix bilood oo xarig ah.
Diego Costa ayaa ka baaqsan kara xabsiga, isla markaana waxaa laga doonayaa inuu bixiyo kaliya lacag dhan 36,000 oo euro si uu uga hor tago inuu jeelka galo.
Kooxdiisa Atletico Madrid ayuu Costa weydiistay inay lacagtaasi ka bixiso, balse naadiga ka dhisan caasimadda Spain ee Madrid waa ay ku gacan sayrtay arrintaas.
Yeelkeede, kooxda Rojiblancos lagu naynaaso ayaa dhinaca kale wanaag u sameysay xiddigan Diego, waxaana la sheegay inay mushaharkiisa u hormariyeen si uu isaga bixiyo lacagtaas.